ချစ်သူတို့အတွက်မှတ်သားစရာ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ ချစ်သူတို့အတွက်မှတ်သားစရာ
NyanLynnHtaik မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
Latest Activity: Apr 17 မျှဝေမယ် Twitter
ကိုဒီရဲဂျာနဲ့ ကျွန်တော်ပူးပေါင်းတည်ထောင်တဲ့အဖွဲ့ လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဒီရဲဂျာရဲ့ ဆန္ဒကအဓိကပါ.....သူမအားလပ်လို့ သူ့ အစားလုပ်ပေးတာပါ။
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အတွက် နော်တို့မြန်မာချစ်သူများမှ လက်လှမ်းမိသလောက် သိသမျှ ရသမျှကို
ဒီမှာရေးပေးသွားပါမယ် လို့ ချစ်သက်တမ်းပိုရှည်ကြာအောင် ဖတ်ရှုသင့်သည့် အချက်အလက်များ'
အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး.....အဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်လာရောက်အားပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Started by teresamomoko. Last reply by saisoeaung Feb 18. လက်ထက်လက်စွပ်ကိုဘာလို့လက်သူကြွယ်မှာဝတ်ရတာလဲ?
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ကျော်ဆန်းလင်း Feb 11. အချစ်ရေးအဆင်မပြေသောအခါ အမျိုးသားများသည်
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ကျော်ဆန်းလင်း Feb 11. ချစ်သူတို့အတွက် အဟာရ ( ချစ်သူတွေ သိသင့် သိထိုက်တာများ ..)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by မိုးယုခိုင် Feb 9. Admin
Started by အမည်မသိ. Last reply by saisoeaung Jan 26. နှုတ်ဆက်အကြည့်
Started by fantastic htet myat Jan 26. မိန်းကလေးတွေချစ်သူကိုဘယ်လောက်အထိလိုက်လျောသင့်လဲ။
Started by myat su. Last reply by Thidar lwin Jan 21. အချစ်လေးမျိုး ရှိတယ်တဲ့ဗျာ ဖတ်ကြည့်ပါအုံး............
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Thidar lwin Jan 21. ရင်ခွင့်ပျောက်သူမင်းသမီးလေး( မိန်းကလေးများအတွက် )
Started by ရင်ခွင့်ပျောက်သူမင်းသမီးလေး. Last reply by yunandarhlaing Dec 13, 2012. စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်သော မိန်းကလေးချစ်သူပိုင်ရှင်များအတွက်
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Aung Aung Dec 13, 2012. ချစ်သူကိုနမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုရော သိပါသလား။
Started by ရဲဂျာ. Last reply by +ဦးဟန်ဂျူး+ Dec 12, 2012. တိုးတိုးတိတ်တိတ် စကား(၁ဝ)ခွန်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by နံရိုး Dec 3, 2012. Admin
Started by အမည်မသိ. Last reply by nawyiwin Dec 3, 2012. ချစ်သူများအတွက်
Started by aung khant. Last reply by ရွှေဝန်း၇ံ Nov 24, 2012. အမှတ်တရ အနမ်းသုံးကြိမ်
Started by kyaw naing tun. Last reply by ရွှေဝန်း၇ံ Nov 24, 2012. ဖြေပေးခဲ့နော်....:P
Started by vipfamily. Last reply by kgmalay Nov 5, 2012. နောက်ဆုတ်လို့မရတာတစ်ခုထဲနဲ့ရှေ့တိုးသင့်ရဲ့လား??????????
Started by myat su. Last reply by ma cherry khin Sep 26, 2012. ချစ်ချင်သူတွေအတွက်အချစ်နည်းလေးတွေပါ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by နန်းဆုလာဘ် Sep 25, 2012. Admin
Started by အမည်မသိ. Last reply by Nann Thuzar Aung Sep 4, 2012. သင်တန်းတက်တာ ဖက်ရှင်လား
Started by aung kyaw moe. Last reply by လင်ဗဟိန်း Apr 3, 2012. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of ချစ်သူတို့အတွက်မှတ်သားစရာ to add comments!
Comment by ဧက၇ီ on February 13, 2013 at 4:53pm ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Comment by fantastic htet myat on January 26, 2013 at 2:38pm လာလည်တယ်နော် Admin Comment by နံရိုး on December 3, 2012 at 8:41am အရမ်းကောင်းပါတယ် Comment by အောင်ကျော်ထက် on November 1, 2012 at 11:43pm တော်တော်ကောင်းပါတယ်နောက်လဲ တင်ပေးပါဦးဗျာ
Comment by သေမင်းတမန် on September 26, 2012 at 12:55pm ကျေးဇူးပါ Comment by ရဲကျော် on September 5, 2012 at 8:16am အော် ..အချစ် အချစ် အချစ် Comment by MC kinoshitar on August 3, 2012 at 9:36pm ကီနိုကတော.အချစ်ဆိုတာကိုရူးသွပ်မူတခုလို.ပဲမြင်တယ် Comment by fairy angle on July 19, 2012 at 1:13pm Comment by =+@ kyaw thu hlaing @=+ on June 22, 2012 at 10:32pm ချစ်တယ် ချစ်သူ ငါ.အသက်တွေထဲက တစ်ဝက်ကို မင်းအတွက်ပါ Comment by =+@ kyaw thu hlaing @=+ on June 9, 2012 at 8:22pm အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းချစ်ကြလို. သိကြပါတယ် ကျွန်တော်ချစ်သူ အတွက်ပါဗျာhttp://api.ning.com/files/qNVxUAwLELa*c2Kkg3W-dxDOuwsWrEOg8Cx9WmR9XZi3lr1yFlNfIQCBPGkY92csJbsXdeHpoHZMl5-ZkIR5tmcsRdllRukM/may.swf ချစ်သူ မင်းကို ဒီသီချင်းလေးလို ချစ်တယ် ‹ နောက်သို့